Kedu ihe bụ arịa: njirimara, ụdị na sistemụ ihu | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 21/09/2021 11:39 | Meteorology
N'ọnọdụ ụfọdụ ihu igwe ihu igwe nke na -aga ebe dị elu, ahịrị nwere ike ịhụ na maapụ nke o doro anya na ọhaneze anaghị aghọta nke ọma. A na -ejikarị ụdị ahịrị ndị a mgbe ụfọdụ iji kọwaa mpaghara mmiri ozuzo na nrụgide ndị e buru n'amụma n'elu ụwa. A na -akpọ ahịrị ndị a dị ka ite mmiri. Ọtụtụ ndị amaghị kedu ihe eji esi nri na ihe ọ na -anọchite anya ya.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ite mmiri bụ, njirimara ya na ụdị ya.
1 Gịnị bụ trough
2 Ụdị troughs
3 Usoro n'ihu
4 Ọwa mmiri na ahịrị nke enweghị ike ikuku
Enwere nkọwa dị iche iche n'ime akwụkwọ sayensị nke ihe ite mmiri bụ. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ ọ bụ mpaghara elongated nke nrụgide ndị ikwu dị ala n'elu ma ọ bụ n'ọkwa dị elu. A naghị ejikọkarị ya na mgbasa mechiri emechi, yabụ ejiri ya mata ya na obere mechiri emechi. Ihe dị iche bụ azụ. Nkọwa nke a yikarịrị ka echiche nke ite ọkụ ma ọ bụ barometric. N'ọnọdụ ndị a, ọ ga -ezuru ịchọ obere ma ọ bụ ịdị elu nke ikuku dị elu ebe isolineas ịda mba na -adịghị nso ịdọrọ ite.
Tinyere nnukwu ite mmiri, echiche nke mmiri na -atụgharịgharị apụta. Ọ bụ nke ndị isobars, nke bụ ahịrị nha nha nha, ha na -ewepụta ntụzịaka dị iche iche karịa chiiz nkịtị gbasara ịda mba. Enwere ike ịsị na ite a tụgharịrị agbatị ga -esi na ala ịda mbà n'obi gbadawa.
Echiche nke ite mmiri na -emetụta nrụgide nke ikuku, okpomọkụ ma ọ bụ mpaghara ikuku mana ọ naghị enwe oke mmiri ozuzo ma ọ bụ meteorology n'oge ahụ.
Ka anyị hụ ihe bụ isi ụdị akpa mmiri dị:
Oghere barometric. Ọ dabara na mpaghara dị n'akụkụ n'otu ọkwa, mpaghara ikuku nke nwere ikuku ikuku dị ala. Ndị nnọchianya ma ọ bụ sistemụ isobars na-anọchi anya ya na ihe dịka V n'ụdị na tebụl ihu igwe, concavity ya na-arụtụ aka na nrụgide dị ala.
Ihe na -agbagharị agbagharị. Ịda mbà n'obi na -etolite n'azụ oke ugwu nke na -agafe n'ụzọ kwụ ọtọ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ kwụ n'ahịrị. Dịka ọmụmaatụ, nke a na -eme mgbe ifufe ọdịda anyanwụ na -ezute eriri ala site na ugwu ruo na ndịda.
Mmiri na ifufe Ista. Mpaghara nrụgide dị ala na mpaghara nke ifufe ahia, n'ozuzu ya dabere na oke ikuku na -aga site na ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ.
Mmiri na ifufe ọdịda anyanwụ. A na-agba ya mmiri na ikuku dị n'ebe ọdịda anyanwụ n'etiti etiti, na-aga n'ihu na-aga ọwụwa anyanwụ. Mgbakwunye akwa a na ifufe ọwụwa anyanwụ nke latitude dị ala jikọtara ya na oke ikuku ọdịda anyanwụ dị elu, karịa ikuku ọwụwa anyanwụ nke ọkwa ala.
Ebe oyi na -atụ. Ebe mgbanye ikuku nke ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa mpaghara dị ya nso.
Ogwe polar. Mmiri na mpaghara okirikiri mpaghara ọdịda anyanwụ zuru oke iji ruo mpaghara ebe okpomọkụ dị elu. A na -emetụta elu ya na ndagwurugwu nrụgide dị ala na oke ikuku ọwụwa anyanwụ, mana ifufe ọdịda anyanwụ na -apụta n'ebe dị elu. Ọ na -agakarị site na ọdịda anyanwụ ruo n'ọwụwa anyanwụ yana nnukwu mkpuchi igwe ojii na ọkwa niile. Oke ụyọkọ na cumulonimbus na -apụtakarị na nso ahịrị ndagwurugwu. Oké ifufe nke June na October na ọdịda anyanwụ Caribbean na -etolite na ndagwurugwu pola.
Anyị nwere ike ịga n'ihu na -elele ma na -enyocha akwụkwọ ọkọwa okwu na -enweghị nkwubi okwu siri ike. Na nkọwa nrụtụ aka niile, okwu gbasara ohere ma ọ bụ nke na -ejikọ ịdị adị nke ndagwurugwu nwere obere oghere na akụkụ nke oge adịghị apụta, n'agbanyeghị na a na -atụle nke a n'ụzọ doro anya: ndagwurugwu ndị ahụ bụ akụkụ nke anụ ahụ, nke na -anaghị egosipụta elu oge. Iji ghọta ihe ịda mba bụ, anyị ga -atụle usoro usoro mmalite.
A kọwapụtara ihu n'ihu n'ụzọ doro anya nkwụsị na ohere nke oge n'etiti ikuku ikuku nke na-eme n'etiti etiti ma nwee njikọ na oke ifufe. Ikekwe, akụkụ ogologo ya na okirikiri ndụ ya na-eme ka ọ daba n'ime ihe akpọrọ meteorological. Ihe onyonyo eserese ya amaara nke ọma ma dịkwa mfe ịmata ya.
Anyị nwere ihu nke akọwapụtara nke ọma, nke bụ nkwụsị n'etiti igwe ikuku abụọ nwere njirimara ihu igwe dị iche iche n'ihe gbasara ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, ikuku, wdg. Ebe a na-ahụkarị na ọkwa meteorological na-amalite inwe akụkụ atọ, yabụ nkwụsị ahụ rutere n'ogo dị ala, dịka ọmụmaatụ ruo 700-500 hPa. Oghere oge gboo (ihu ihu jụrụ oyi, ihu ọkụ, na ihu mgbapụ) abụghị ihe ọzọ karịa usoro nke ikuku na -ekesa gradients kwụ ọtọ na kwụ ọtọ nke okpomọkụ na iru mmiri n'etiti ebe okpomọkụ na -ekpo ọkụ na mpaghara ihu igwe na latti polar oyi. Ha na -emetụta oke ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe ma nwee oke ihu igwe. Ihu na -emetụta mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ na sistemụ ihu enweghị ntụgharị uche n'elu, a na -ekwu na ihu dị ogologo. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe owuwu ndị a dị mma nwere akara ngosi ihu nke ha, ọ bụ ezie na ụfọdụ na -ese ha dị ka ite mmiri.
Ọwa mmiri na ahịrị nke enweghị ike ikuku
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, A na-adọta olulu mmiri dị ka ihe metụtara mmiri ozuzo na-abụghị ihu ihu nke ọnwa kacha ekpo ọkụ, nke a na -esite na foci na -agbanwe agbanwe na -amalite ehihie na abalị. Ebumnuche ịda mbà n'obi ndị a adọtara na maapụ ihu igwe bụ ịkwado mpaghara igwe ojii, ọkachasị amụma ma ọ bụ nyocha mmiri ozuzo, nke a na -atụgharịkarị dị ka ahịrị mgbanwe mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ mmebi n'ihi convection. Isi okwu bụ, mgbe ụfọdụ ahịrị ndị a na-akwụghị chịm na-akwado site na mgbali ọkụ na oke ọkụ na ọnụ ọnụ ọkụ dị ala, ihe niile nwere ike ịmepụta gburugburu dị mma maka convection. N'echiche a, ịda mbà n'obi na -abụkarị n'azụ mmiri ozuzo / mkpuchi mkpuchi, nke metụtara mgbanwe ihu igwe metụtara convection na oké ifufe.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe akwa mmiri na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Gịnị bụ trough